Vaccinera dig mot influensa i Skåne - somaliska
Iska-tallaal influensada/hargabka - Skåne
Vaccinera dig mot influensa i Skåne - somaliskaThe content concerns Skåne
Xilliga dayrta iyo qaboobaha kasta waxaa dalka Iswiidan ka dilaaca cudurka influensada/hargabka. Influensada/hargabka hab dhaqsi badan ayay dadka is-qaadsiiyaan. Qaar iyaga kamid ah hab halis ayay ugu xannuunsadaan. Sidaas awgeed, waxaa fiican in influensada/hargabka sannada kasta layska tallaalo.
Influensada/hargabka waxaa sababa fayruus. Calaamadaha influensada/hargabka waxaa tusaale ka mid ah qandho, madax-xannuun iyo dhuun-xannuun.
Haddii influensada/hargabka iska tallaasho waad ka badbaadi doontaa dhibaatadiisa. Dad badan maba ku xannuunsadaan. Kuwa ku dhacana influensada/hargabka badi ahaan sidaas uguma xannuunsadaan.
Tallaalka influensada sannooyin aad u badan ayaa la isticmaali jiray, waxaana laga isticmaala adduunka oo idil. Sidaas awgeed waa tallaal sugan oo kalsooni lagu qabo.
Iska-tallaal haddii aad ka tirsan tahay kooxaha hab halis ah ugu xannuunsada
Dadyowga badidooda si fiican ayay influensada/hargabka ugu bogsadaan, mana u baahna in ay iska iska-tallaalaan. Haseyeeshe, dadyowga qaarkood hab halis ah ayay ugu xannuunsadaan. Sida tusaale, haddii cudurro kale ay qabaan. Sidaas awgeed ,waa in sannad kasta ay iska-tallaalaan.
Haddii kooxaha hoos ku xusan aad ka tirsan tahay waxaa lagula talinayaa inaad fursadda is-tallaalida ka faa'iidaysato:
Haddii da'daada ay tahay laba iyo lexdan sano ama aad ka wayn tahay.
Haddii aad uur leedahay oona lex iyo toddban toddobaad ay ka soo wareegatay.
Haddii aad wadne-xannuun qabto. Sida tusaale hab-shaqaynta wadnaha u hooseeyo.
Haddii aad sanbaba-xannuun qabto. Sida tusaale cudurka sanbabada ee raaga ee [KOL] loo yaqaanno ama neefta oo ah nooca dhib badan.
Haddii aad cudurka sonkorowga nooca 1-aad ama 2-aad qabto.
Haddii aad qabto cudur ama lagugu daryeelo dawo oo saamayn aad u xun ku yeelato awoodda difaaca jirka.
Haddii hab-shaqaynta kiliyaha ay aad u hooseeyaan, taasoo kiliyahaaga aynan si fiican hawlahooda u qabanayn.
Haddii hab-shaqaynta beerka ay aad u hooseeyso, taasoo beerkaaga usan si fiican hawshiisa u qabanayn.
Haddii aad u cayilan tahay.
Haddii aad qabto cudurka dareen-wadeyaasha murqaha, kaasoo saamayn ku yeesha awoodda neefsashada. Cudurka dareen-wadeyaasha murqaha wuxuu hoos u dhiga tayada hab-shaqaynta murqaha jirka.
Haddii aad la dhiban tahay dhawr nooc oo itaaldarro ah.
Haddii xaaladaada aad hubin waydii dhakhtarkaaga
Ma leedahay cudur kaasoo aadan hubin inaad aad ugu xannuunsan karto haddii hargabku u kugu dhaco? Xaaladdaas ka hubso dhakhtarkaaga.
Sidii aad qof kale u badbaadiso awgeed iska-tallaal influensada/hargabka
Sidii aad qof kale u badbaadiso awgeed waxaa xaaladaha qaarkood fiican inaad i influensada/hargabka iska-tallaasho.
Waa kuwan tusaalaha xaaladaha:
Haddii aad la nooshahay qof heerka difaaca jirkiiisa u hooseeyo.
Haddii aad daryeesho qof heerka difaaca jirkiisa oo aad u hooseeyo.
Tallaalka ayaa adiga kuugu kacaya 150 karoon.
Iska tallaal rugta caafimaadka
Iska tallaal rugta caafimaadka laga bilaabo 9-ka nofeembar.
Rugaha caafimaadka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad ballan samaysato. Wac rugta caafimaadka oo weydii waxa meeshaas khuseeya.
Rugaha caafimaadka Skåne
Tallaalku waa lacag la’aan haddii aad halis ugu jirto cudur khatar ah .
Haddi kale wuxuu tallaalku ku kacayaa 150 karoon. Tusaale ahaan haddii sababta aad isu tallaaleyso ay tahay inaad qof kale cudurka ka ilaaliso.
Haddii aad adigu ka weyn tahay 65 sano
Xaaladaha qaarkood, waxaad adigu isku mar qaadan kartaa tallaalka hargabka iyo tallaalka cudurka covid-19.
Markaa waa inaad ka weyn tahay 65 sano. Waana in laga joogo shan bilood markii ugu dambaysay ee aad qaadatay tallaalkaagii labaad ee cudurka covid-19. Haddii kale waxa tallaalkaaga saddexaad lagu siinayaa markale.
Adiga ayaa dooranaya haddii aad rabto labada tallaal ama hal tallaal oo keliya.
U soo qaado kawan tallaalkaaga:
Tusaale ahaan, liiskanka baabuurka, kaarka aqoonsiga ama baasaboorka.
Kaarkaaga tallaalka. Waxaad heshay kaarka tallaalka markii ugu horreysay ee lagaa tallaalay cudurka COVID-19.
Ma haysatid kaarka tallaalka? Markaa beddelkeeda waxaad tusi kartaa caddeynta covid.
Samayso caddeynta cudurka covid (covidbevis.se) Boggu wuxuu ku qoran yahay luqadda iswiidhishka oo keliya.
Waa inaad ka jawaabto su'aalo ku saabsan caafimaadkaaga tallaalka ka hor. Sidaa darteed waa inaad buuxisaa foom la yiraahdo caddeynta caafimaadka. Waxaad ku buuxin kartaa caddaynta caafimaadka xarunta caafimaadka. Caddeynta caafimaadku waxay ku qoran tahay luqadda iswiidhish oo keliya.
Is-tallaal sannad kasta
Sidaa aad ugu badbaado influensada/hargabka waa in sannad kasta iska tallaasha. Waxtarka maaddada tallaalka waa hal sano. Fayruuska sababa influensada/hargabka sannadka kasta ayuu is-beddela. Maadaama ay sidaasi tahay tallaalkii sannadka hore waxba kuma tarayo. Sidaas awgeed, waa inaad sannad kasta is-tallaalsha. Haddii kale wax badbaado ah influensada/hargabka kama haysatid.